Ex madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed Sheekh oo ka hadlay dagaalkii ka dhacay agagaarka Cadale - SomaliNet Forums
Postby bashe19 » Tue Mar 19, 2019 5:18 am
Ugu horeyn waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya qayba kamid ah gobolka Shabeelaha Dhexe in ay shuruud la’aan colaadda u joojiyaan, islamarkaana gartaan in dagaal uusan faa’iido u lahayn dadka wada dhashay ee ehelka ah iyo guud ahaan umadda Soomaaliyeed.
Marka labaad waxaan bogaadinayaa dadaallada Muqdisho iyo Shabeelaha Dhexe ka socda ee ah in colaaddaas laga hortago, dadka walaalaha ee wax kala tabanaya khilaafkooda lagu xaliyo is afgarad iyo is qancin.
Ugu dambeyntii waxaan xusuusinayaa walaalaha dagaalamaya in dagaal qabiil natiijadiisa ay umaddan soo aragtay 28 sano kabadan, oo aan laga dhaxlin waxaan ahayn halaag iyo in aan umadaha kale ka harno, sidaa darteed walaalayaal aan Allah u laabanno meelna iska dhigno colaadda qabaliga ah, nabad iyo isku tanaasul walaaltinimana aan ku bedelno.
Re: Ex madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed Sheekh oo ka hadlay dagaalkii ka dhacay agagaarka Cadale
Postby Nubis » Wed Mar 20, 2019 2:14 pm
is Sheekh Sharif Sheekh Axmed following Sayidka's footsteps?
by Sadaam_Mariixmaan » Thu Apr 26, 2007 3:20 pm » in General - General Discussions
Madaxweyne Sheekh Shariif oo Magacaabay Gudi
by samatar133 » Sat Apr 14, 2012 6:58 am » in Politics - Somaliland
Sheekh Shariif maxaa ku dhacay?
by melo » Fri Jul 22, 2011 1:43 am » in Politics - Somali Government
Sheekh Shariif ma uu oga inuu yahay madaxweyne Soomaaliyeed
by FBISOMALIA » Tue Jan 18, 2011 2:51 pm » in Politics - Puntland
Madaxweyne Sheekh Shariif: "Xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya
by Addoow » Sat Jun 27, 2009 4:02 am » in Djibouti - Politics
Shariif Sheekh Axmed's Big Error!!!
by Afri_Somali » Tue Nov 17, 2009 1:08 pm » in Politics - Puntland